खरीददारहरू र विक्रेताहरूको लागि नयाँ ग्लोबल थोक विकल्प यहाँ छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक सेप्टेम्बर 27, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
ग्लोब किन्नुहोस् वैश्विक लाभ प्रदान गर्दछ जस्तै सूचीबद्ध अनलाइन storefronts र १०० प्रमुख भाषाहरूमा उत्पादनहरू। हामीसँग विभिन्न प्रकारका मुद्राहरू छन् जहाँ उत्पादनहरू स्वचालित रूपमा स्थानीय मुद्रामा क्रेताको भौतिक स्थान, वा हाम्रो कुनै पनिबाट छनौट गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छन्। Additional 65 अतिरिक्त मुद्राहरू.
खरीददारहरू सँधै नयाँ विचारहरू खोजिरहेका हुन्छन् जुन उनीहरूको स्टोरमा अनुपम हुनेछ। धेरै धेरै छिटो बढ्दो हुनाले, तिनीहरूले प्रायः थोक वेबसाइटहरू भन्दा उत्पादनहरूको अधिक व्यापक चयन प्रदान गर्दछ। हाम्रो प्लेटफर्मले अनलाइन खरिदकर्ताहरूलाई अत्यन्त अनौंठो र नयाँ उपलब्ध उत्पादनहरूको दृश्य प्रस्तुतीकरण दिन्छ जुन उनीहरूले अन्य ठाउँमा कहिल्‍यै कहिले पनि फेला पार्न सक्दैन (वा सजिलै फेला पार्न नसक्ने) पाउन सक्दछन्, र हाम्रा उत्पादनहरूको सूची द्रुत गतिमा बढ्दैछ।
हाम्रो प्लेटफर्ममा अनलाइन स्टोरहरूमा किनमेल गर्नेहरूका फाइदाहरू छन्: समय बचत; खोजीहरू प्रयोग गर्न सजिलो; कोटिहरू र देश फिल्टरहरू; प्लस एकल खरीद र बिलि conven सुविधा अभूतपूर्व भाषा र विश्वव्यापी बेच्ने लाभको साथ।
यो ग्लोब किन्नुहोस् प्रणाली थोक कम्पनीहरूका लागि डिजाइन गरिएको थियो जुन अतिरिक्त बिक्री चाहान्छन् र प्रायः सबै ठूला वैश्विक बजारमा उनीहरूको सामान लिनको लागि संसाधन र पूर्वाधार छैन।
ग्लोब किन्नुहोस् एक ग्लोबल समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ र त्यसैले कोहीले हाम्रा धेरै र पढ्न सक्छन् गुगल समाचारमा लक्षित समाचार लेखहरूसाम्प्रदायिक समाचार र फेसबुक समाचारमा। यो समाचार जडान अनुमति दिन्छ ग्लोब किन्नुहोस् विक्रेताहरू, सित्तैमा, उनीहरूको महत्वपूर्ण घटनाहरू र घोषणाहरू विश्वव्यापी रूपमा पढ्नको लागि प्रकाशित गर्न। हामीले सिकेका छौं कि हाम्रो केन्द्रित समाचार लेखहरूले व्यापारीहरूलाई उनीहरूको अनलाइन व्यापार, ग्लोबल बजारहरू बढाउन र विश्वव्यापी ब्यान्डि establish स्थापना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याएको छ। थप जान्नको लागि जानुहोस् सांप्रदायिक समाचार प्रकाशन.
अनलाइन प्लेटफर्मले खरीददारहरूसँग खुला र सीधा संवादका साथ सीमित (यदि कुनै) मध्यस्थहरू मात्र प्रयोग गर्दछ। हाम्रो धेरै अधिक कुशल र ग्लोबल थोक बजार प्रयोग गर्न सजिलो विक्रेताहरूले समग्र समय घटाउन, उत्कृष्ट ईन्भेन्टरी नियन्त्रण प्रदान गर्न, र प्राय: कम कुल लागत कम गर्न अनुमति दिन्छ।
यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको स्टोरफ्रन्ट र उत्पाद सूचीन कुनै अग्रिम लागत छ र प्रयोग गर्न सजिलो छ, धेरै साधारण शुल्क संरचनाको साथ। यो संरचित सम्बन्धले हामीलाई तपाईंको सफलतालाई हाम्रो सफलतामा मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए यदि तपाइँ बंगलादेश मा वा यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक व्यापार छ र अधिक खरीददारहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु हेर्न चाहानुहुन्छ, यो तपाईका लागि समाधान हो!
सांप्रदायिक समाचार थोक बिक्रेता फेला पार्दै थोक बिक्री गर्नुहोस् ग्लोब किन्नुहोस् थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस् थोक किनमेल
चीनको सब भन्दा ठूलो अनलाइन ड्राइभिंग स्कूल दिवालिया हुन्छ